အမျိုးသမီးများအတွက်ကျပန်းထိပ်တန်းလက်ကိုင်သားရေပခုံးလွယ်အိတ်များကို - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အကောက်ခွန်မပါ ၀ ယ်ပါ။ | WoopShop®
မော်စကိုကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာ၊ တစ်လကျော်သွားပြီ။ သို့သော်ဤသည်မဟုတ်ဘဲရုရှားပို့စ်၏ပြproblemနာပါ! အိတ်ကောင်း! သပ်သပ်ရပ်ရပ်ကောင်းမွန်စွာချုပ်ထားသည်။ ဝယ်ရန်ကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။
ငါတစ်ပါတ်အကြာတွင်ကလက်ခံရရှိ, အရည်အသွေးကောင်းသောနှင့်အစာရှောင်ခြင်းရေကြောင်း, ငါတကယ်ပျော်ရွှင်မိပါတယ်
ငါကပိုပြီးစဉ်းစားပေမယ့်အိတ်ကလူတန်းစားပဲ၊ အနံ့ကတော့သူမဆီကပါ။ အရည်အသွေးမကောင်းဘူး၊ ငါပျော်တယ် ဝတ်ဆင်သောအခါဘာဖြစ်မည်ကိုကြည့်ပါ
сумкапростосупер .. оченьдовольнакачеством, объёмомисрокомдоставки .. спасибо .. )))